Atomu IDE, shanduko yeimwe yeanonyanya kufarirwa kodhi edhita | Linux Vakapindwa muropa
Atomu ndeimwe yeakakurumbira kodhi edhita kunze uko. Pakati pezvimwe zvinhu, ayo modularity chimiro, ayo ekuwedzera-ons uye kusangana kwayo neiyo Github sevhisi, repository sevhisi inozivikanwa pakati pevagadziri uye programmers.
Github, zita riri kuseri kwemupepeti uyu, azivisa izvozvo ichaburitsa inovandudza IDE iyo ichave yakavakirwa paAtom munguva pfupi. Iyi IDE ichadaidzwa kuti Atomu IDE uye ichave Atomu pamwe nematurusi anodiwa kuti ive IDE.
Kuve neiyi IDE isu tinongofanirwa kuisa yazvino vhezheni yeAtomu, iyo parizvino iri beta vhezheni uye mushure mekuisirwa, wedzera mutauro wechirongwa watinoda kushandisa. Izvi zvichave zviri muchimiro chekuwedzera kana kuwedzera. Uye kana iri mitauro, ivo vachatungamirwa nemavara «ide-«, saka zvichave nyore kuziva pasuru yekuisa mukati meiyi kodhi mhariri.
Pamwe Atom IDE haisi iyo IDE inogumisa iyo Android Studio monopoly, Netbeans kana Eclipse, asi ichave ichishandiswa zvakanyanya nevadikani veAtom, nekuti, parizvino, hazvireve zvinopfuura kuwedzera akati wandei mapakeji kune mupepeti, pasina kuchinja iwo maitiro kana mashandiro. Zvakare chichava chinoyevedza IDE kune avo vanoshandisa kodhi mhariri uye siya mubatanidzwa mune imwe nzira kana mune mamwe maoko. Muchinhu ichi, Atom IDE inomiririra mukana wakanaka Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Atomu IDE, shanduko yeimwe yeanonyanya kufarirwa kodhi edhita